2017 ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
Blade of the Lmmortal (2017)
နာမည်ကြီး Manga series ဖြစ်တဲ့ Blade of the Immortal ကို live action ပြန်ရိုက်ထားတာပါ Manga series ကို ကြည့်ဖူးသူတွေကို အထွေအထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုပေမဲ့ မကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက် အတိုချုပ် ပြီး ပြောပြပါမယ်နော် ကိုယ့်ဆရာနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုပြန်သတ်မိပြီး ထွက်ပြေးနေတဲ့ Manji ဟာ တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ ဒဏ်ရာရပြီး သေလုမျောပါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Yaobikuni ဆိုတဲ့အဖွားကြီးက သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ထူးဆန်းတဲ့တီကောင်လိုအကောင်တွေ ထည့်ပေးလိုက်လို့ Immortal တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ် နောက်နှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အခါ Itto-Ryu လို့ခေါ်တဲ့ ဓားပညာရှင်တွေစုစည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကြောင့် မိဘနှစ်ပါးလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ Rinn ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး သူ့ရဲ့ကလဲ့စားချေလိုစိတ်ကြောင့် Rinn က Manji ကို လိုက်ရှာပြီး အကူအညီတောင်းခဲ့တယ် Manji က သူ့ကို ကူညီပြီးတော့ ဘယ်လိုကလဲ့စားချေကြမလဲ သူတို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး Itto-Ryu ကို ကလဲ့စားချေနိုင်မှာလား ကြားထဲမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ တွေ့ရဦးမှာလဲ ဆိုတာကိုတော့ အသတ်အဖြတ်တွေကြားထဲက ကြည့်ရမှာပါ IMDb 7.2 တောင်ရထားတာမို့ Manga ကြည့်ပြီးသားသူတွေရော မကြည့်ထားတဲ့သူတွေရော သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
နာမည်ကျော် ကြေးစား လူမုဆိုး ဘွန်းန် တစ်ယောက် သူတို့ရဲ့ Rating ကျဆင်းလာတဲ့ Boone: The Bounty Hunter ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို တာဝန်ရှိသူတွေက ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာ ဘွန်းန် တစ်ယောက် သူ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့အလုပ်အာမခံချက်အတွက် မူးယစ်ရာဇာ တစ်ယောက်ရဲ့ အမှုကို လက်ခံခဲ့ပါတယ် တရားခံက မက္ကဆီကို ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဘွန်းန် လည်း အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီး တရားခံဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မက္ကဆီကို မှာ ဘွန်းန် ကိုထောက်ခံသူဟာ မရှိသလောက်ကိုနည်းပါးပါတယ် ကံဆိုးချင်တော့ အဲ့ဒီဒေသလေးဟာလည်း မူးယစ်ရာဇာ ကြီးဆိုးနေတဲ့ ဒေသဖြစ်နေပြန်တယ် ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ ဘွန်းန် တစ်ယောက် သူတို့အလုပ်ကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူ့မိတ်ဆွေတွေကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာ တွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူး တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
Can We Still Be Friend (2017)
“အချစ်စစ်မှာ ပြီးပြည့်စုံမှုကိုတောင်းဆိုနေတာဟာ သိပ်ကိုရူးမိုက်တဲ့လုပ်ရပ်ပါပဲ”တဲ့ Movieထဲကအကြိုက်ဆုံးစာသားလေးပါ…ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ… ဆမ်နဲ့ဒစ် ဟာ တွဲလာကြတာ ၈နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပြီး တစ်အိမ်တည်း အတူနေထိုင်ကြတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပေါ့… ဆမ်(မင်းသမီး)ကတော့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒစ် (မင်းသား)ကတော့ဝင်ငွေချောက်တိ ချောက်ချက်ရတဲ့ Comicရေးသူပါ…ဆမ်နဲ့ဒစ်ဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ခင်ကြပေမယ့် ဒစ် ဟာပေါ့ပေါ့နေတတ်သူဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း… ပုံမှန်ဝင်ငွေလည်းမရတာတစ်ကြောင်းကြောင့် အိမ်စရိတ်တွေ အိမ်မှုကိစ္စတွေအားလုံးဟာ ဆမ့်တစ်ယောက်တည်းအပေါ်မှာပဲအမြဲကျရောက်နေတဲ့အချိန်…ဆမ်ကလည်းမိန်းကလေးပီပီ ရုံးကသူငယ်ချင်းကိုအားကျပြီး ချစ်သူရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေ စပရိုက်တွေ ကိုလာတွေ မျှော်လင့်လာမိရာက…သူတို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲတဲ့အထိဖြစ်လာရပါတယ်…လမ်းခွဲပြီးနောက် ဆမ်ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မင်းသားပုံစံ ဆရာဝန် ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချော စပရိုက်တွေလည်းလုပ်ပေးတတ်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ….ဆမ်ဟာပျော်ရွှင်သွားရတော့မှာလား??? ဒစ်ကရော ပြောင်းလဲလာမှာလား??? ဘာ ညာ ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးဘာသာပဲရှုစားလိုက်ဖို့ “Can we still be friend?” ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဘာသာပြန် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်
Cant Help Falling inLove (2017)
ဒီကားလေးကတော့ အပြင်မှာလဲတကယ့်စုံတွဲတွေဖြစ်တဲ့ Kathryn Bernardo နဲ့ Daniel Padilla တို့အတွဲရဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ Gab ( Kathryn ) နဲ့ Dos ( Daniel ) တို့က မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာတွေ့ကြပြီးတော့ အဲ့ဒီညမှာပဲကလပ်တစ်ခုမှ မူးပြီးသူငယ်ချင်းတွေစနောက်ရင်း မင်္ဂလာဆောင်မိခဲ့ပါတယ်.. စနောက်ရင်းလုပ်လိုက်ပေမဲ့ သူတို့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ Dos ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မြို့တော်ဝန်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် သူတို့၂ဦးရဲ့လက်ထပ်မှုက တရားဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါကိုသူတို့သတိမထားမိခဲ့ကြပဲပုံမှန်ပဲနေခဲ့ကြတယ် နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့ Gab ကသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှ သူတို့၂ဦးရဲ့လက်ထပ်မှုကအတည်ဖြစ်နေခဲ့တာကို သိခဲ့ရပြီးပြန်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် Dos နဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့ ၂ယောက်ပေါင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ ဘယ်လိုတွေလွဲကြမလဲ ကြားထဲမှာဘယ်လိုပြသနာတွေတတ်ကြမလဲ နောက်ဆုံးဘယ်သူနဲ့ညားကြမလဲ ဆိုတာကို ရိုက်ထားတဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန်ဖန်စီအချစ်ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ယန် ဂျီအန် ဆိုတဲ့လူငယ်လေးပြိုင်ပွဲတွေကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ မြောက် အာဖရိက ကိုသွားပြီးလုပ်အားပေးကူညီတဲ့ တရုတ် အိုင်တီ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ပါ။တောင်နဲ့မြောက်ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေကိုအနိုင်ရသူကပဲထိန်းချုပ်ခွင့်ရတယ်။ပြင်သစ် လျှို့ဝှက်စုံထောက် မိုက်ကယ် ကအနောက်ဘက်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။မြောက်ဘက်ကိုသွားပြီးပြိုင်ပွဲတွေကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့သူဌေးကအမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူတို့က အာဖရိက ရဲ့ကြီးမားတဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။သူကကြေးစားနိုင်ငံခြားသားစစ်သား အာဖရိက မှာရှိတဲ့ လာဒါ လို့ခေါ်တဲ့လူနဲ့အရင်ဗိုလ်ချုပ် ကက်ဘား ကိုငှါးခဲ့ပြီးသူ့ကိုကူညီဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ ယန် ကသူတို့တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုသူတစ်ယောက်ပဲတားဆီးလို့ရတယ်။…
2017 ခုနှစ်ရဲ့ အလှပဆုံးရုပ်ရှင် Columbus Columbus ရုပ်ရှင်ဟာ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကြားမှာ မှတ်ချက်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ပြီး Cinematography အရ အလှပဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ကားလို့ပါ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ Indie/Art Film ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Imdb 7.3, Rotten Tomatoes 98% ရရှိထားပြီး Archi Major ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားပါ။ Columbus မြို့က နာမည်ကျော်ဗိသုကာပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ Coma ဝင်သွားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ ဂျင် ဟာ ကိုရီးယားကနေ Columbus ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တည်းက အဖေနဲ့သားကြားမှာ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အတွက် ဂျင်ဟာ အဖေ့အနားမှာမနေပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုသာအာရုံစိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဗိသုကာပညာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်မလေးနဲ့ ဂျင်နဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ဆုံမိခဲ့ပြီး Columbus မြို့ရဲ့ ဗိသုကာလက်ရာအပြောင်မြောက်ဆုံး နေရာတွေကို အတူတူသွားရောက်လည်ပတ်ပါတော့တယ်။ သူတို့သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့ အဆောက်အဦးတွေကနေတဆင့် ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေယူကြသလဲ၊ ဒီအဆောက်အဦးတွေက သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေသလဲဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဗိသုကာပညာဆိုတာ အပေါ်ယံကြည့်တဲ့အခါ အဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုလောက်သာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သေချာအတွင်းကျကျ ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းတစ်ခုဟာ လူတွေရဲ့ အပြုအမူ၊ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဒီရုပ်ရှင်က မီးမောင်းထိုးပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အချစ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုမဟုတ်သလို ဗိသုကာပညာအကြောင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်လဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဗိသုကာလက်ရာတွေကနေတဆင့် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲက အခက်အခဲ၊ အချုပ်အနှောင်တွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ Columbus ရုပ်ရှင်ရဲ့ scene တိုင်းဟာ Wallpaper ထားချင်လောက်အောင် လှပလွန်းပြီး ရုပ်ရှင်ကင်မရာအယူအဆတွေ အများကြီးထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Architecture Major ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ မကြည့်မဖြစ် ကြည့်သင့်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပြီး ဒီရုပ်ရှင်ကနေတဆင့် ဗိသုကာလက်ရာကောင်းတစ်ခုရဲ့ အရေးပါပုံကို သိလာနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒီကားကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်၂၀၁၇ ရဲ့အလှပဆုံးရုပ်ရှင်လို့ ညွန်းတာမလွန်ပါဘူးဆိုတာ လက်ခံလာမှာအသေချာပါပဲ။
ကန် ဒေါ်လာ တရားမဝင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ ချာ ဂီဆန်း လို့ခေါ်တဲ့ အကြီးတန်း ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ယောက်က နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်ပြီး ဒေါ်လာထုတ်တာမှာ သုံးတဲ့ သတ္တုပြားတွေကို ခိုးယူဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒီအခြေအနေမှာ ဗိုလ်မှူး အင် ချွဲယောင်း က တာဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ ရဲဘော် ဟွာယောင်းကို ဓားစာခံလုပ်ပြီး အကျပ်ကိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူ လက်နက်ချလိုက်ရတယ် ဒါပေမဲ့ ချာ ဂီဆန်း က သူပြောတဲ့အတိုင်း ကတိမတည်ပဲ အားလုံးကို သတ်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့လည်း အင် ချွဲယောင်း ကိုမသတ်ခဲ့မိတဲ့ သူ့ရဲ့အမှားက … သူ တောင်ကိုရီးယား ကို တိမ်းရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခပေးပါတော့တယ် ချွဲ အင်ယောင်းက တောင်ကိုရီးယား ရဲစုံထောက် ဂန် ရှင်းထယ် နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ချာ ဂီဆန်း ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒီလို တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် မယုံကြည်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ တောင်-မြောက် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးက အောင်မြင်ပါ့မလား ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ထပ်ပြီးကြုံတွေ့ရဦးမလဲ အင် ချွဲယောင်း နဲ့ဂန် ရှင်းထယ် တို့ကော အသက်အန္တရာယ် ကင်းလွတ်ပါ့ဦးမလားဆိုတာကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Drama/Action အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDB rating လည်း 6.4 အထိရထားတဲ့အပြင် Girls’ Generation ရဲ့အလှပဂေး Im Yoon-ah ကပါ အားဖြည့်ကူညီပေးထားတာကြောင့် CM ပရိသတ်ကြီးတို့ အကြိုက်တွေ့ကြဦးမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်
Channel Myanmar ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ဒီတစ်ခေါက် တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ May 19 ရက် နေ့မှ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပူပူနွေးနွေး “Everything Everything “ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားပါ ရိုမတ်တစ် အချစ် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ပြောပါရစေ- မယ်ဒလင်း လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေး ဟာ ၁၈ နှစ်လုံးလုံး အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး… သူ မထွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူ့ရောဂါ ကြောင့်ပါ…. ကမ္ဘာပေါ်မှာ တွေ့ရခဲတဲ့ စကစ် ရောဂါကို သူမ ခံစားခဲ့ရပါတယ်… အဲ့ရောဂါ က ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ… အပြင်လောကနဲ့ ထိတွေ့လိုက်တာနဲ့ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဓာတ်မတည့်တာတွေ စဖြစ်တော့တာဘဲ… ၁၈နှစ်လုံးလုံး ဘယ်မှမသွားရ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေလဲ မရှိတဲ့ဘဝ ဟာ မတွေးရဲလောက်အောင် ခက်ခဲလွန်းပါတယ်… တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ အိမ်ရှေ့ကို ပြောင်းလာတဲ့ ခပ်ချောချော အိုလီ ဆိုတဲ့ ကောင်လေး နဲ့ မယ်ဒလင်း ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်… သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ပြတင်းပေါက်မှန်ကနေ လက် ဟန်ခြေဟန် ပြပြီး စကားပြောကြတာပါ ????… Taylor Swift ရဲ့ You belong with me သီချင်းထဲကလိုလေ ????… သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ မတ်ဆေ့ အပြန်အလှန်ပို့ စကားအပြန်အလှန်ပြောရင်းနဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ်… ခက်တာက မယ်ဒလင်း အိုလီ နဲ့ တွေ့ရအောင် ဘယ်လို အိမ်ပြင်ထွက်ရမလဲ… မတော်တဆ သေ တဲ့ အဆင့်ထိ အန္တရာယ်ရှိနိုင်မလား… ပျော်စရာ ဇာတ်သိမ်းဖြစ်မလား??? ဝမ်းနည်းစရာ ဇာတ်သိမ်းဖြစ်မလား ဆိုတာကတော့ Channel Myanmar ပရိတ်သတ်တို့ ရင်ခုန်စွာ ကြည့်ရှူခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ဇာတ်လမ်း ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စရာ ရိုက်ကူးထားတာမို့ ကြည့်ရှူသူ တန်မှာပါ..
018 ခုနှစ်ထွက်ထားတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ အကြိုက် အင်နီမေးရှင်းကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်ကားလေးကတော့ Oz ဆိုတဲမှော်တိုင်းပြည်ကြီးကို အလည်သွားရောက်တာကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ သားသားမီးမီးတို့ အကြိုက် မျောက်ကလေးတွေ ငှက်ကလေးတွေ နဲ့ ဝက်ဝံကြီးလဲပါပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးက ကတော့ Urfin ဟာ Oz ဆိုတဲ့ မှော်တိုင်းပြည်ကြီးကို မတော်မတရားသိမ်းပိုက်ပြီး အုပ်ချုုပ်ဘုရင်လုပ်ချင်တာပါ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ သူ့ရဲ့ သစ်သားစက်ရုပ်တွေနဲ့ တက်ပြီးတော့ သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ ဒီမှော်တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ နာမည်ကို Urfinville ဆိုပြီးနာမည်ပါပြောင်းလိုက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ သူဟာ သူ့နန်းတက်ပွဲအတွက် ကျင်းပဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေချိန်မှာ သူ့အတွက် အနှောက်အယှက်ဝင်လာတာကတော့ တခြားတိုင်းပြည်ကနေ သောက်ကမျင်းကြောထပြီး ရောက်လာတဲ့ ဒေါ်ရိုသီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးပါ သူနဲ့ အတူ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ခြင်္သေ့ကြီး ၊စာခြောက်ရုပ်လေးနဲ့ သံပတ်ရုပ်လေး တို့ဖြစ်ပါတယ် ကဲ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကကော ဒေါ်ရသီကို အိမ်ပြန်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်မှာလား ဒေါ်ရသီကကော မှော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက အဆ ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
CM ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် History/Action အမျိုးအစားIMDB 6.1 ရရှိထားတဲ့ ရရှားဇာတ်ကားလေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်၁၃ ရာစုမှာ မွန်ဂိုစစ်အာဏာရှင် ဂျင်ဂစ်ခန်ဟာ အာရှနဲ့ ဥရောပ တစ်ခွင်လုံးကို ကျူးကျော်စစ်ခင်းပြီး သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ရရှားနိုင်ငံဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲအဲ့ဒီကာလမှာ ရရှားကောင်လေးကိုလိုဗရတ်က ၁၃နှစ်သား စစ်တပ်ထဲဝင်ချင်တဲ့ သတ္တိခဲလေးပါဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ရန်သူမွန်ဂိုတွေ လက်ချက်နဲ့ ခေါင်းထိပြီး မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်သွားပါတယ်
အသက်တွေကြီးလာပြီး စစ်သည်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးရတဲ့ စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့် တစ်ညအိပ်ပြီး မနက်မိုးလင်းလာတိုင်း ၁၃နှစ်သားမှတ်ဉာဏ်ကိုပဲ ပြန်ပြန်ရောက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့နေတဲ့မြို့လေးကို ဂျင်ဂစ်ခန်ရဲ့ သား ဘာတူခန်က မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့…နောက်လိုက်စစ်သည် အယောက်နှစ်ဆယ်တည်းနဲ့ ကိုလိုဗရတ်တစ်ယောက် ထောင်သောင်းချီတဲ့ မွန်ဂိုစစ်တပ်ကြီးကို အညံ့မခံ အရှုံးမပေးပဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လဲ
မနက်လင်းတိုင်း မှတ်ဉာဏ်တွေ မပျောက်သွားအောင် သူဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး
***** Russia ကနေ English လို English ကနေ Myanmar ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာပြန်လွဲမှားမှုတစ်ချို.ရှိနိုင်ပါတယ်*****
Gods Own Country ဇာတ်ကားလေးဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်ထွက် ဗြိတိန် BL ဒရာမာကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Sundance Film Festival မှာ world cinema directing ဆုရရှိထားပါတယ် Imdb rating 7.7/10 နဲ့ rotten tomatoes 99 % ရရှိထားပါတယ်…. ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေကတော့Josh O’Connor …..Alec Secareanu….Ian Hart စတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အဘွားဖြစ်သူ လေဖြတ်နေတဲ့ဖခင်တို့နဲ့အတူနေထိုင်တဲ့Johnnyဟာ အိမ်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ မွေးမြူရေးခြံကို တစ်ယောက်တည်းကိုင်တွယ်လုပ်ကိုင်နေသူပါ…. နောက်ပိုင်းအလုပ်တွေမနိုင်တာကြောင့် ရိုမေနီးယားမှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား Gheorghe ကို အကူအညီရရန်အလုပ်ခန့့်လိုက်ပါတော့တယ်…. သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက ပြဿနာတွေ…..အချစ်တွေ….အခက်အခဲတွေ စတဲ့ရသအစုံအလင်အပြင် အသည်းကွဲရတာများတဲ့ BL ချစ်ပရိသတ်တွေ ဒီကားမှာရော ပျော်ရွှင်ရမလားဆိုတာ ဇာတ်သိမ်းထိ စောင့်ကြည့်ပေးပါဦး
Youth Without God ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Crime/Drama/Science-Fiction အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Bavarian Film Award (2017)မှာ Best young Actor ဆုနဲ့ German Film Award (2018) မှာ Best Production Design ဆုမှာ nominate ခံထားရတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Rating ကတော့ 5.7 အထိရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ပြောရရင် Hunger Game နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ဂျာမန်ကျောင်းသားတွေက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rowald Eduation Performance Center ကို တက်ရောက်ခွင့်ရအောင် ယှဉ်ပြိုင်ကြိုးစားကြတာပါ။ အဲ့လို ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ Rowald က လက်ရွေးစင်ကျောင်းသားတွေကို Camp သွင်းပြီး တောအုပ်တွေထဲမှာ missions တွေကို လုပ်ခိုင်းတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရချင်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ဘယ်လို အခက်အခဲယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျောင်းသားထဲက မင်းသားဖြစ်တဲ့ ဇက်ခ်က ယှဉ်ပြိုင်ရင်း မတော်တဆ လူသတ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလူသတ်မှုကရော တစ်ကယ် ဇက်ခ် သတ်တာဖြစ်ပါ့မလား အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူကြိုးကိုင်နေတာလဲ ဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။ ပြောချင်တာက ဇာတ်လမ်း ကို ကြည့်ရင်းနဲ့ အဖြေကို ခန့်မှန်းလို့မရဘဲ Twisted လုပ်ထားတဲ့အတွက် ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်မှ ဟင်ကနဲ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားစေတာပါ။ ရိုက်ချက်ကလည်း တော်တော်မိုက်တဲ့အတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။
mmbusticketကျွန်တော်တို့အားလုံး Wonder Woman ဆိုတဲ့စူပါဟီးရိုးကို သိကြပါတယ်။မပေါ့်တပေါ် အဝတ်အစားရယ်၊ ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရယ်၊ သူ့ရဲ့ စွမ်းအားတွေရယ်က အတော်လေးကို ရေပန်းစားပါတယ်။ဒီကားလေးကတော့ Batman, Superman တို့လို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ တန်းတူရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ဒီ Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ကို ဖန်တီးခဲ့သူ စိတ်ပညာပရော်ဖက်ဆာ မာစတန်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါ
တယ်။အချစ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။လူတိုင်းဟာ အချစ်ကို တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ လက်ခံထားကြပါတယ်။
တစ်ချို့က လိင်ကွဲပဲ ကြိုက်သလို၊ လိင်တူပဲ စိတ်ဝင်စားသူလဲရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် 20 ရာစုအစောပိုင်း၊ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်ကျဉ်းမြောင်းခဲ့ကြတဲ့ခေတ်မှာ လိင်တူချစ်သူတွေ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ လှုပ်ရှားသူတွေ အတော်အကျပ်ရိုက်ခဲ့ပါ
တယ်။ထူးခြားတာက ပရော်ဖက်ဆာ မာစတန်ရဲ့ မိန်းမဖြစ်သူ အက်လီဇဘတ်ကိုယ်တိုင်က လိင်တူချစ်သူတစ်ဦးဖြစ်နေတာပါပဲ။Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ကလဲ Bisexual တစ်ယောက်ပါ။မာစတန်ဟာ Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ကို သူ့ဘဝမှာ အချစ်ရဆုံးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပေါ် အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။Wonder Woman ရဲ့အဝတ်အစားကလဲ အဖော်အချွတ်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ Lasso of Truth ကလဲ လိင်ဆက်ဆံရာမှာသုံးတဲ့
ကြိုးကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လူတွေက အဲ့ဒီလိုပုံဖော်မှုနောက်ကွယ်က Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ရဲ့ တကယ်ပေးချင်တဲ့ Message ကို မသိခဲ့ပါဘူး။ဒါတွေကို ပရော်ဖက်ဆာ မာစတန် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ၊ သူ့ရဲ့ လင်မယားဘဝအြခေအနေကရော ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှူကြပါခင်ဗျ။စူပါဟီးရိုး ဂိဆရာတို့အတွက်ကတော့ ဂိသထက်ဂိအောင် ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ကားပါ ?
CM Fan တွေ အတွက် မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်း ပါဝင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…ရုပ်ရှင်ကား နာမည်ကတော့ နာမီယာ တဲ့…ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတော့ နာမီယာ စတိုး ဆိုင်လေးပါ…ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အချိန်စက်ဝိုင်း တစ်ခုဆီ စပ်ကြားက စာတိုက်ပုံးလေး တစ်ခု နဲ့ စတင်ထားပါတယ်….ဟုတ်ပါတယ် ….နာမီယာ စတိုးဆိုင် ရဲ့ ပိုင်ရှင် ဟာလူတိုင်းရဲ့ အခက်အခဲတွေကို သူ့ စာတိုက်ပုံးကနေ လက်ခံပြီးအကြံဉာဏ်တွေပေး ၊ အားပေး နှစ်သိမ့်စကားတွေ ပြောတက်သူပါသူကလဲ အချိန်ပေးပြီး စာပြန်တက်ပါတယ်…နာမီယာ ရဲ့ ပရိတ်သက်တွေကတော့ ကလေးအများစု ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ အိမ်တွင်းရေးတွေကို တိုင်ပင်ကြပါတယ် သူတို့ နှစ်သက်တဲ့စူပါဟီးရိုး တွေ ၊ အနုပညာရှင်တွေ ဆီ စာရေးကြပါတယ်…စာတွေကို ဒိုင်ခံပြန်ပေးနေသူကတော့ နာမီယာ စတိုးဆိုင် ပိုင်ရှင်အဘိုးအိုကြီး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….ဒီလိုနဲ့ အဘိုးအိုလဲ သေဆုံးပြီး ကလေးတွေလဲ အရွယ်ရောက်ကုန်ကြသလိုနာမီယာ စတိုးဆိုင်ဟာ ပိတ်ထားခဲ့တာ နှစ်တွေ ချီသွားခဲ့ပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ စာတိုက်ပုံးကနေအချိန်စက်ဝိုင်း အရှေ့ နဲ့ နောက် ကိုကူးပြောင်းပြီး စာတွေ ရောက်လာခဲ့သောအခါ….ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့
သင်ဟာ လူငယ်ဆန်ဆန်နဲ့ အချစ်အလွမ်း အကြမ်း ရသစုံ ကြိုက်တတ်တဲ့သူဆိုရင်ဒီကားလေးကို ကြည့်သင့်ပါတယ်ဒီနှစ်ပိုင်းထွက်ရှိတဲ့ South Indian Romance Action ကားတွေထဲမှာ ဒီကားလေးကို ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ. . .မနက် 7:30 အချိန်ကို ရောက်တိုင်း ကောင်လေးတစ်ယောက် ကရစ်ရှ်နားမီးပွိုင့်နားက ခုံတန်းလေးမှာ လာထိုင်တတ်တယ်.သူ့မျက်နှာဟာ လွမ်းရိပ်သန်းနေတယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုဖွေရှာနေတဲ့ ရီဝေဝေမျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့. . . အဲ့ဒိအချိန် ရုတ်တရတ် သူ့ဆီကို ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်Call Taxi လို့ခေါ်တဲ့ ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ရတဲ့ တက္ကစီဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ဆီက. . .သူတက္ကစီခေါ်ထားလို့ ဖုန်းဆက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဟိုဘက်က ပြောတယ်သူကလည်း သူမခေါ်ထားကြောင်း ပြန်ရှင်းပြတယ်. . .ရုတ်တရတ်. . .အဲ့ဒ်ီရုတ်တရတ် ခဏလေးမှာ. . .ဖုန်းပြောနေရင်းဖုန်းထဲက တစ်စုံတစ်ခုကို သူကြားလိုက်တယ်. . .သူဟိုးငယ်စဉ်ကတည်းက စွဲလန်းတသ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အသံလေး. . .ရိုးသားဖြူစင်လွန်းလှတဲ့ ကလေးဘဝမှာ သူကြားဖူးခဲ့တဲ့ အသံလေး. . .သူကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ သံစဉ်တစ်ခု. . .တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ တယောကနေလှလှပပလေး ခုန်ပေါက်ဆတ်ဆော့ပြီး ဖြည်းဖြည်းညင်းညင်းနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ထွက်ပေါ်လာနေတာဟုတ်ပါရဲ့. . .ဒီအသံလေးနားစွင့်ရင်းသူဟာ အတိတ်ကို တဒင်္ဂပြန်ရောက်သွားတယ်. . .ကြာခဲ့ပြီ တိတိကျကျဆိုရရင် 14 နှစ်ရှိခဲ့ပြီ. . .တစ်စုံနစ်ခုကို သူ့နှလုံးသားထဲကနေမျှော်လင့်တောင့်တရင်းနဲ့ ရှင်သန်နေခဲ့ရတာ 14 နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပြီပဲ. . .. . .ဇာတ်လမ်းသွားကိုတော့ အဲ့ဒီလိုလေး စထားတယ်. . .ဟိုးအထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ. . .ရသစုံပါဝင်ပြီး တမေ့တမောခံစားရလောက်တဲ့အထိကို ဇာတ်လမ်းဟာ ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်လွန်းပါတယ်. . .အချစ်ကား အကြည့်နည်းတဲ့ကိုယ်တောင်ဇာတ်လမ်းဆုံးတော့ ကြည်နူးတာလားဝမ်းနည်းတာလား အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိထားမိချိန် ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်တွေ စီးကျနေပါပြီ. . .
စစ်သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပရပ်ဂျစ်မှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့ ရီယာဆိုတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူ့သမီးလေးမှာရောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ရှိနေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါ သူ့အသည်းတွေကွဲကြေသွားခဲ့ပါတယ်သူ့သမီးလေးရဲ့ရောဂါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေနေရင်းနဲ့ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်က တခြားလူတွေလည်း ရေထောက်ပံ့ရေးကနေလာတဲ့ရေကြောင့် ကင်ဆာရောတွေဖြစ်ပြီးသေဆုံးနေရတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ် တာဝန်ရှိသူတွေက အဲ့ဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့အခါမှာ သူကဘယ်လိုဘယ်ပုံစံတွေနဲ့ဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါသာမန်ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကြောကနေခွဲထွက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ